पर्यावरण संरक्षण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हामी खबरदारी गर्छौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / पर्यावरण संरक्षण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हामी खबरदारी गर्छौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता May 30, 2018	0 218 Views
राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष
राष्ट्रिय जनमो र्चा दाङको चौ थो जिल्ला अधिवे शनले भर्खरै नया ने तृत्व चयन गरे को छ । नया कमिटीको बै ठकले जनजीविकाका सवालमा खरो उत्रिने गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गनेर् निर्णय गरे को सरकारी तथा गै रसरकारी क्षे त्रमा हुने भ्रष्टाचार र प्राकृतिक स्रो तको दो हन रो क्ने अभियान र पार्टी गतिविधिका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले नवनिर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष गणे शकुमार आचार्यसग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
नया ने तृत्व आएपछि पार्टी गतिविधि के भइरहे का छन् ?
भर्खरै हाम्रो चौ थो जिल्ला सम्मे लन सम्पन्न भएको छ । सम्मे लनले मे रो ने तृत्वमा नया कार्यसमिति चयन गरे को छ । समिति बनिसके पछि हामीले पत्रकार सम्मे लन आयो जना गरी आगामी कार्यक्रम र के ही विशे ष प्रस् तावहरु बाहिर ल्याएका छौ ं । लगत्तै जिल्ला कमिटीको बै ठक बसे र पनि विभिन्न निर्णय गरी पार्टीका गतिविधिलाई निरन्तर अघि बढाउने तयारीमा हामी लागे का छौ ं । लामो संघर्षपछि हामीले गणतन्त्र स्थापना गरे का छौ ं । संविधानसभा त हामीले कति धे रै संघर्षबाट प्राप्त गरिएको हो र त्यसबाट नया संविधान निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न तहका निर्वाचन समे त भइसके को अवस्थामा जसरी नीतिगतरुपमा दे शमा गणतन्त्र स् थापना गरे का छौ ं तर व्यवहारमा गणतन्त्रको महसुस हुन सके को अवस् था छै न । अहिले पनि राणा शासन, पञ्चायती व्यवस् थाको बे लाजस्तो भ्रष्टाचार, अनियमितता छ“दै छ । जनताका से वाका लागि हाम्रा ने ताहरु हिजो कै पञ्चे र राणाको जस् तो व्यवहार गरिरहे का छन् । जनताका प्रतिनिधिसग जनताको सम्बन्ध पञ्चायती व्यवस् थामा जस् तो अहिले पनि छ । यो अवस् थामा जनताका कामहरुलाई सहज, सुलभ हुनुपर्छ भने र हामीले खबरदारी गरिरहे का छौ ं । गणतन्त्रको अनुभूति अहिले का जनप्रतिनिधिहरुले गराउने हो तर जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशै ली त्यस् तो पाइएको छै न । त्यसै ले यावत समस् याका समाधानका लागि खबरदारी गनेर् र पार्टीका आफ्ना एजे ण्डालाई स् थापित गनेर् खालका गतिविधिहरु हामीले गरिरहे का छौ ं । खासगरी चो रबाटो बाट ल्याइएको संघीयताको खारे जीको माग हामीले गरिरहे का छौ ं । संघीयता हाम्रो दे शले धान्न सक्दै न । धान्नका लागि जनतामाथि जबर्जस् ती कर असुल्ने काम ने पाल र ने पालीका लागि फाइदा छै न ।
हो यही कुरा जति चुनावका बे ला भन्नुभयो अहिले त सुस् ताएको जस्तो दे खियो त ?
त्यस् तो हो इन । हामीले अहिले पनि कार्यक्रम नै बनाएर अघि बढे का छौ ं । खासगरी जिल्लाका सबै स् थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने , जिल्लास् िथत सबै सरकारी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र यस् ता गतिविधिहरुकै जानकारी गराउन सम्वन्धित ठाउ“मा को णसभा, पत्रकार सम्मे लन गरे र आम जनतामाझ पु¥याउने तयारीमा हामी लागे का छौ ं । यसै गरी यही कुरा बुझाउन जिल्लाका १० वटै तहमा जनप्रशिक्षण गनेर् तयारी पनि भइरहे को छ । संघीयता र गणतन्त्र एउटै कुरा हो इनन्, यी फरक कुरा हुन् । गणतन्त्रलाई संस् थागत र व्यवस् िथत गर्नुपर्छ संघीयता जरुरी छै न । अहिले स् थानीय तहहरुले जनताको ढाड से किने गरी कर लिएका छन् । बिडम्वना त के छ भने यहा आफ्नो नाममा रहे को पाखो बारीको पो त तिर्न खाडी मुलुक पुगे र कमाएर तिर्नुपनेर् अवस्था छ । त्यो पाखो बारीमा के ही उत्पादन ह“ुदै न । किन यस् तो भएको छ त भन्दा संघीयताकै कारणले भइरहे को छ । हिजो ५० रुपै यॉ“ले हुने काम आज एकहजार बढी तिर्नुपरे को छ । यो थे ग्न सकिदै न । अझ खतरा के छ त भन्दाखे री संघीयताकै कारण गणतन्त्र पनि खतरामा पुग्छ कि भन्ने छ । यो सत्य हो इन । संघीयता र गणतन्त्र फरक विषय हो  । तर मान्छे हरुको बुझाइका कारणले संघीयताले थो परे का समस् याले आम नागरिकमा गणतन्त्र ठीक रहे नछ भन्ने भ्रम फै लिने खतरा छ ।
कर नतिरी त कसरी विकास हो ला र ?
विकासका लागि जनताले न्यायो चित कर तिनेर् कुरामा हाम्रो विरो ध हो इन । जनताले कर तिर्नुपर्छ र न्यायो चित रुपमा कर संकलन गर्नुपर्छ र जनताको उत्पादन क्षमतालाई हे र्नुपर्छ । जनतालाई उत्पादनको स्रो त दिनु नपनेर् , आम्दानी हुने स्रो त बनाइदिनु नपनेर् , उद्यो ग कल, कारखाना बनाइदिनु नपनेर् , अनि भएको पाखो बारीको कर ४५ डिग्री तातो खाडीमा काम गरे र बुझाउनुपनेर् तर राज्यले जनताका लागि के ही गर्नु नपनेर्  ? अहिले त संघीयताकै कारणले कर बृद्धि भएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको तलव भत्ताकै लागि कर बृद्धि गर्नु परे को हो  । हु“दा ह“ुदा पूर्वपदाधिकारीहरुले समे त राज्यबाट से वा सुविधा लिने काम भइरहे को छ । यसले अन्ततः जनतालाई नै मार परिरहे को छ । यो राम्रो हो इन ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कसरी रो क्नुहुन्छ ?
भ्रष्टाचार रो क्ने काम राज्यको हो  । हाम्रो भूमिका खबरदारी गनेर् हो  । त्यसै ले हामीले सबै सरकारी कार्यालय अगाडि मूलगे टमा कतै तपाइ“ले भ्रष्टाचार गरिरहनुभएको त छै न ? भने र बो र्ड राख्ने तयारी गरे का छौ ं । जिल्लाका सबै स् थानीय तह र सरकारी कार्यालय अघि यस् तो नारा राख्ने तयारीमा छौ ं । यसले खबरदारीको काम गनेर् छ । अकोर् कुरा भ्रष्टाचारीको पहिचान गनेर् , सा“च्चिकै खो ज्ने हो भने भ्रष्टाचारी पत्ता लगाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचारी पहिचान गरे र प्रशासनलाई खबर पु¥याउने काम गर्छाैर् ं । बा“की कारवाहीको काम राज्यको हो  । हामीले ठाउ“को पहिचान गनेर् र कारावाहीका लागि अनुरो ध गनेर् काम हाम्रो हो । हामीले निर्भिकताका साथ गर्छांैर्  । हाम्रो खबरदारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सचे तनाको काम पनि गनेर् छ ।
भ्रष्टाचार रो क्ने कुरा सस्तो लो कप्रियताका लागि हो भन्छन् त ?
खाली लो कप्रियताका लागि मात्रै हो इन । राजनीतिक पार्टीहरुले जनपक्षीय काम गर्दा लो कप्रियता कमाउनु एउटा कुरा हो ला तर हामीले लो कप्रियता कमाउ“ला भने र हो इन । जनताका नाममा हुने भ्रष्टाचार कसरी रो क्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । एउटा सामान्य नागरिकले से वा लिदासमे त पै सा लिने , ढिलासुस् ती गरिदिने काम भएका छन् यो दुःखद कुरा हो  ।
कहा–कहा छ भ्रष्टाचार ?अहिले हे नेर् हो भने भ्रष्टाचार छै न भन्ने कुनै पनि ठाउछै न । यहा छ किन भन्नुप¥यो र ? हाम्रो संस्कृतिमा भ्रष्टाचार छ । हाम्रो कार्यशै लीमा भ्रष्टाचार छ । ले नदे न छ छदै छ । सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार छ । भन्नुस् कहा“ छै न भ्रष्टाचार ? जनताको भीड जहा“ छ त्यहा“ भ्रष्टाचार बढी छ । जनताका दै निक जीवनस“ग जो डिएका आवश्यकताका काम जहा–जहा“ छन् त्यहा“ सबै ठाउ“मा भ्रष्टाचार छ । ट्रान्सपरे न्सी इन्टरने शनलको तथ्यांकले ने पालमा कति भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्ले ख गरिसके को छ । उसको रिपो र्टले राजनीतिक भ्रष्टाचार अत्यधिक भइरहे को कुरा उल्ले ख छ । किन छ त भन्दा राजनीतिक संरक्षणको नाममा भ्रष्टाचार भएको छ ।
त्यो त तपाइहरुले नै धे रै भ्रष्टाचार मौ लाउनु भएको रै छ ?
हामी राजनीतिक पार्टी हौ ं । समग्र राजनीतिक पार्टी भएका नाताले हामीमाथि पनि प्रश्न उठ्यो तर त्यहा भित्र त गुण र दो ष हे र्नु पर्ला नि । त्यहाभित्र पनि विचारधारा फरक छन् । कार्यक्रम फरक छन्, नीति फरक छन् । कार्यशै ली फरक छन् । स्वभाव फरक छ । एजे ण्डा फरक छन् । ने तृत्व फरक छन् । त्यसै ले सबै लाई एकै ठाउ“मा राख्नु त भएन नि ।
भिन्न–भिन्न रुपमा हुने भ्रष्टाचार कसरी रो क्ने त ?
खबरदारी र भण्डाफो र हामीले गरिरहे का छौ ं । यो निरन्तर नै चल्छ । मुख्य कुरा चे तना जागरण गनेर् कुरा महत्वपूर्ण हो  । गहिराइमा गएर हे र्दाखे री के ही गरिवी पनि समस् या हो ला । पछौ टे पन पनि एउटा समस् या हो ला । हाम्रो चे तनाको कुरा पनि एउटा समस्या हो ला । समस् या के हो त भन्दा हामीमा भएको निम्न पू“जीवादी चिन्तन नै हो  । राजनीतिक पार्टीले आफूलाई के न्द्रमा राखे र काम गनेर् , राजनीतिमा लागे कै आधारमा मै ले के प्राप्त गनेर् , मे रो नातागो ता, इष्टमित्रले के प्राप्त गरे , स् िथति यस् तो छ । अकोर् कुरा समाज नै कस् तो छ भने एउटै परिवारमा भ्रष्टाचार गनेर् भाइको सम्मान प्रतिष्ठा अकैर् छ । किनभने ऊसग पै सा छ । समाज नै कस् तो छ भने भ्रष्टाचारलाई प्रो त्साहित गनेर् खालको छ । हामीले यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । निरुत्साहित गर्नका लागि हामीले गनेर् कार्यक्रम पनि एउटा माध्यम हो ।
प्राकृति स्रो तको दो हो न धे रै भो भने र अभियान चलाउनुभयो । त्यो पनि हरायो  ?
हराएको छै न । ने पालमा जुन निकायले संविधानको , कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपनेर् हो , त्यही निकायले सबै भन्दा धे रै कानुनको उल्लंघन गरे को छ । प्राकृतिक स्रो त साधनको संरक्षण गनेर् ,
त्यसलाई जो गाउने , त्यसको यथो चितरुपमा उपयो ग गनेर् कुरा राज्यले ख्याल गर्नुपनेर् कुरा हो नि । राज्यमा बसे काहरुले
ख्याल गर्नुपनेर् कुरा हो नि । तर त्यहींबाट सबै भन्दा धे रै दुरुपयो ग गरिएको छ । उनीहरुकै संरक्षणमा दुरुपयो ग गरिएको छ ।
हाम्रो कुरा के हो भने प्राकृतिक स्रो त साधनको संरक्षण र यथो चितरुपमा सदुपयो ग गर्नुपर्छ भन्ने हो  । हामीले प्राकृतिक स्रो त साधनलाई उपयो ग गरे र समृद्धि ल्याउने हो  । बिडम्बना ! सरकारले हाम्रा प्राकृतिक स्रो त साधनलाई कौ डीको मूल्यमा विदे शीहरुलाई सुम्पिरहे को अवस् था छ भने अकोर् कुरा नियम, कानूनलाई उल्लंघन गरे र दुरुपयो ग गनेर् काम भइरहे को छ । यसले समृद्धिको एजे ण्डालाई रो किदियो भने अकोर् कुरा त्यही कारणले पर्यावरणमा समस् या भएको छ । अनियन्त्रित ढुंगा, चुनढुंगा उत्खनन गरिएको छ, खो लाको छे उमा क्रसर उद्यो ग चलाइएको छ । त्यसै ले जसले कानून बनाएको छ उसै ले उल्लघंन पनि गरिरहे को छ । त्यसै ले राज्यले गनेर् काम हामीले गर्नुपरे को हो  । हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहे का छौ ं । पर्यावरण जो गाउने काममा हामी लागे का छांै  । दाङमा हामीले पर्यावरण संरक्षण अभियान बनाएका छौ ं र त्यसका माध्यमबाट पनि के ही काम भएका छन् । अहिले पनि जिल्ला सम्मे लनस“गै पर्यावरण संरक्षणको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्ने यो जनामा छौ ं ।
कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरणलाई कसरी हे र्नु भएको छ ?
एमाले र माओ वादीबीच एकीकरण भएको छ । विचारको हिसावले दुईवटा पार्टीबीच समान विचार भएपछि एकीकरण हुनु स् वागतयो ग्य कुरा नै हो  । हाम्रो पार्टीले पनि पार्टी एकीकरणको स् वागत गरिसके को अवस् था छ । किनभने दे शका ठूला वाम दल एक ठाउमा आउनु सकारात्मक नै हो  । यसले राजनीतिक स् िथरता कायम गर्छ भन्ने हामीलाई लागे को छ । तर कम्युनिष्ट आन्दो लनका हिसाबले हे र्दा यो समस् याग्रस् त नै छ । किनभने एमाले को कुरा गर्दा २०२८ सालको झापा बिद्रो हदे खि लिएर उसले उठाएका एजे ण्डा, माओ वादीका सन्दर्भमा भन्ने हो भने ०५१/५२ दे खि उठाएका एजे ण्डाका कुरालाई हे नेर् हो भने यी दुबै पार्टी दक्षिणपन्थी बाटो मा स् खलनतर्फ गइरहे का छन् । यो अवस् थामा कम्युनिष्ट आन्दो लनका हिसाबले यो एकीकरण राम्रो हो इन । तर तत्कालीन राजनीतिक स् िथरता कायम गनेर् हिसाबले हो भने यो ठीक छ । यसलाई हामीले स् वागत गरिसके का छौ ं । कम्युनिष्ट आन्दो लनमा यसले एउटा भ्रम सिर्जना भने गनेर् छ ।
एउटै कम्युनिष्ट निर्माणतिर यहाहरु आकर्षित हुने सम्भावना छै न त ?
सम्भावना छै न भन्न सकिदै न । सम्भावना छ । हामीले के भने का छांै भने एमाले र माओ वादी गठबन्धन हुने सन्दर्भमा पनि हामीबीच पनि कुरा आएका थिए । हामीले के भने का छौ ं भने ने पालमा शक्तिशाली, वैचारिक कम्युनिष्ट पार्टीको जरुरी छ । विचारविहीन हो इन, वै चारिक अडानसहितको कम्युनिष्ट पार्टीको जरुरी छ । हामीले यो कुरा भने का छौ ं । त्यो खालको लडाइ“ लड्ने शक्ति एमाले , माओ वादीभित्र पनि छन् । त्यो हिसाबले भो लि छलफल हुदै गयो भने र वै चारिक हिसावले एकठाउ“मा आउने कुरा भयो भने ने पालका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउ“ हुने सम्भाव नै रहन्न भन्ने कुरा छै न, तर अहिले त्यो स् िथति छै न ।
Previous: १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट
Next: जता–जता खोला, उतै ‘सिमाना’